Bit By Bit - Running fanandramana - 4.5.3 ny vokatrao manokana
Ny fananganana ny vokatrao manokana dia fiatoana avo lenta sy avo lenta. Fa, raha toa ka mahomby, dia afaka mandray soa avy amin'ny tsipika mahasamihafa mahavariana ianao izay manome fikarohana miavaka.
Ny fakana ny fomba fananganana ny fanandramanao manokana dia iray dingana kokoa, ny mpikaroka sasany dia manangana ny vokany manokana. Ireo vokatra ireo dia manintona ireo mpampiasa ary avy eo dia atao toy ny sehatra ho an'ny fanandramana sy karazana fikarohana hafa. Ohatra, nisy vondrona mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Minnesota namorona ny MovieLens, izay manome tolo-kevitr'ireo sarimihetsika maimaimpoana maimaim-poana. MovieLens dia niasa tsy tapaka nanomboka tamin'ny 1997, ary nandritra izany fotoana izany dia nanome mpitsoka maherin'ny 20 tapitrisa tamin'ny horonantsary maherin'ny 30 000 (Harper and Konstan 2015) 250.000 ny mpampiasa voasoratra. Ny fampiasana ny MovieLens dia nampiasa ny vondron'olona mavitrika hikaroka fikarohana tsara, manomboka amin'ny fanandramana fikarohana siantifika momba ny fanomezana ho an'ny (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) bahoaka (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) . Maro tamin'ireo fanandramana ireo dia tsy ho azo natao raha tsy nisy mpikaroka nifehy tanteraka ny vokatra azo tamin'ny asa.
Mampalahelo fa sarotra be ny fananganana vokatrao manokana, ary tokony hieritreritra ianao toy ny famoronana orinasa iray fanombohana: risika avo lenta, avo lenta. Raha mahomby, ity fomba fanolorana ity dia manome ny ankamaroan'ny fanaraha-maso izay azo avy amin'ny fananganana ny fanandramanao manokana amin'ny zava-misy sy ny mpandray anjara izay avy amin'ny fiasan'ny rafitra misy. Ankoatra izany, io fomba fanao io dia mety afaka mamorona fantsom-pifandraisana tsara izay ahafahana manao fikarohana bebe kokoa amin'ny vokatra tsara kokoa izay mitarika ho amin'ny mpampiasa marobe izay mitarika ho amin'ny mpikaroka marobe kokoa (sary 4.16). Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha vantany vao misy tsikera mafonja miverina, dia tokony ho mora sy mora kokoa ny fikarohana. Na dia sarotra be aza izany fomba izany amin'izao fotoana izao, dia manantena aho fa hihatsara kokoa izany amin'ny fampivoarana ny teknolojia. Na izany aza, raha te-hifehy ny vokatra ny mpikaroka, mandra-pahatongan'izany, ny tetikady mivantana dia ny hiara-miasa amin'ny orinasa, ny lohahevitra izay horesahiko manaraka.
Sary 4.16: Raha afaka mamorona ny vokatrao manokana ianao, dia afaka mandray soa avy amin'ny tsikera mahavariana tsara ianao: Ny fikarohana dia mitarika ho amin'ny vokatra tsara kokoa, izay mitarika ho amin'ny mpampiasa bebe kokoa, izay mitarika fikarohana bebe kokoa. Ireo karazana fantsom-pifaliana ireo dia sarotra be ny mamorona, saingy afaka mamela ny fikarohana izay tsy ho azo atao raha tsy izany. FilmLens dia ohatra iray amin'ny tetik'asa fikarohana izay nahomby tamin'ny famoronana fehezan-kevitra tsara (Harper and Konstan 2015) .